Maalinta: Juun 7, 2017
Safari Tur oo ku taal Palandökende Laga bilaabo
Safarka Palandökende Safari wuxuu Bilaabmayaa: Ejder3200 Palandöken World Ski Center, oo labanlaabtay awoodeedii hal-abuurka xilli ciyaareedkan, ayaa sidoo kale riixay badhanka howlaha xagaaga. Xilliga jiilaalka, muwaadiniinta [More ...]
BozankayaSi loo soo saaro 10 trolleybus loogu talagalay Şanlıurfa
BozankayaWaxay soo saari doontaa Basaska Basaska 10 loogu talagalay Şanlıurfa: Bulshada waxay soo saartaa xalka korantada ee gaadiidka Bozankaya Lixdii Xaraashyada ee la soo dhaafay in 2 sano oo Lix gobol oo kala duwan ayaa sidoo kale ka soo qayb galay Turkey saxiixay rikoor. Malatya, [More ...]
Waddada Istiklal ayaa ku dhufan doonta Deegaanka
Hawada Duzce Istiklal Street way afuufi doontaa: Duzce ayaa loo xiri doonaa taraafikada habeenka jimcaha, wadada ugu mashquulka badan magaalada Istanbul Istiklal Street, ujeedkeedu waa inay ku duubto hawada caanka ah ee Duzce Municipality, waxay u furatay hindise wadada tareenka. mashruuca [More ...]
Gaadiidka Deegaanka ee Deegaanka ah Bixiya Gaadiidka Tayada
Bixinta Gaadiidka Tayada leh ee Basaska Deegaanka u Wanaagsan: Maanta, safka ugu horeeya ee qodobada wasakhowga deegaanka waa gaasas waxyeelo leh oo laga sii daayo gawaarida ilaa dabiiciga. Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, iyada oo shaqadan laga qabtay xaga gaadiidka dadweynaha, tayada safarka magaalada [More ...]
Apaydin: Halka Netwa Networks ayaa sii kordhaya Ap
YHT Networks Expanding: Maamulaha Guud ee TCDD İsa ApaydınBishii Juun, joornaalka Raillife wuxuu daabacay maqaal cinwaankiisu yahay HT Shabakadahayada 'HT Wareegyadayada' Wareegtada 'Waxtarrada' ayaa sii ballaaranaya ". 160 waxay had iyo jeer awood u laheyd inay aragto horumarada taariikheed ee tareenka tareenka oo ka bilaabay khadka İzmir-Aydın sanado ka hor. [More ...]
Gaadiidka xamuulka ah ee aan kala go 'lahayn ee ka imanaya Yurub kuna socda Shiinaha tareenka: Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta, ayaa daabacay maqaal cinwaankiisu ahaa "Gaadiidka aan xaddidneyn ee Gawaarida ee joornaalka Raillife. Turkey ayaa soo bandhigay sannadihii la soo dhaafay, 15 dhaqaalaha [More ...]
Gaadiidka dadweynaha oo bilaash ah LYS ee Malatya
Gaadiidka Dadweynaha waa u bilaash ardayda geleysa LYS Malatya: MOTAS waxay qaadi doontaa ardayda gali doona LYS si bilaash ah dhamaadka usbuuca. 10 June Sabti, 11 Juunyo Sabti iyo 17 Juun Sabti oo leh 18 Juunyo Axadda [More ...]
Usküdar-Çekmeköy Metro waxay noqon doontaa tan ugu casrisan adduunka
Üsküdar-Çekmeköy Metro wuxuu noqon doonaa kan ugu Casrisan Dunida: Duqa Magaalada Istanbul Kamba Topbaş wuxuu la kulmay Muwaadiniinta iftar ee Çekmeköy Taşdelen. Kadir Topbas, Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Istanbul, wuxuu la kulmay dadka deggan Çekmeköy oo ku yaal afurka magaalada Taşdelen. Duqa magaalada Çekmeköy [More ...]
Kacaankii ugu dambeeyay ee Kocaeli: Akcaray
Tareenka, oo ku jiray ajandaha 2009 ilaa magaalada Kobanheegan, waligeed ma dhammaanayso. Mid ka mid ah ballan-qaadyada Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli muddo sannado ah, mashruuca 'Akçaray' tram, 550 maalin waa la dhameystiri doonaa ka dib bilowga shaqada. Laakiin waa [More ...]
Madaxwaynaha Dogan ayaa kormeeray shaqada tareenka ee horteeda maxkamadda
Duqa magaalada İzmit Nevzat Dogan, ayaa kormeeray shaqada taraamka horteeda maxkamadda. Duqa magaalada oo sameeyay baaritaano qeyb kamid ah howlihii wadooyinka tareenka kaas oo qiimo weyn ugu soo kordhin doono magaalada laga fuliyey horteeda Kocaeli Courthouse. [More ...]
Mid ka mid ah dhinaca of Turkey ayaa afar labeeyo la YHT
Afar Turkey ee kooxda ka mid ah YHT labeeyo: Turkiga Afar kooxda ka mid ah YHT labeeyo: Asia-Europe 124 kiiloomitir ee line Istanbul Tareenka Xawaaraha Sare (YHT) in la sameeyo. Wadooyinka Ankara-Sivas, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars [More ...]
Cusboonaysiinta Rakibaadda Korantada ee Bakhaarada Dhirta ee Haydarpaşa Port Tunçbilek Station Cusboonaysiinta Qalabka Iftiiminta Iftiiminta Meelaha Sahaminta iyo Qalabka Cabbiraadda Khariidadda ayaa loo iibsan doonaa si loogu isticmaalo Khadka YakT. [More ...]
Shaqadu waxay ka bilaabatay mashruuca wadajirka ah ee TÜBİTAK iyo TÜDEMSAŞ: “Maareynta Istaraatiijiga ah, Maareynta Nidaamka iyo Aasaasidda Nidaamka Xakameynta Gudaha” mashruuca wuxuu ka bilaawday inta u dhaxeysa TÜBİTAK iyo TÜDEMSAŞ. Turkey Railway Machines Industry Inc. (TÜDEMSAŞ) [More ...]
Mashruuca Shahaadada Tareenka waxaa lagu soo bandhigay Sivas: Shanaad ee Bandhigga Mashruuca iyo Aqoon-isweydaarsiga Macluumaadka Muddada Dheer ah oo ay soo qabanqaabisay YOLDER iyada oo ku xaddidan mashruuca tababarka xirfadda “Rail Welders waa la Xaqiijiyay oo ay taageerayaan Midowga Yurub. [More ...]